Umshini Wokugcwalisa we-Aerosol, Amagilavu ​​Alahlayo, Izingubo Zokuvikela - Zhongmaohua
Funda kabanzi ngathi Hambani
IShijiazhuang Zhongmaohua Trading Co, Ltd. igxile ezintweni zokuvimbela i -virus, ukukhiqiza nokuthengisa, imikhiqizo yethu ithengisile emhlabeni wonke, ikakhulukazi ezimakethe zase-US, Japan naseYurophu, ukuthengiswa phesheya kwezilwandle kwathatha ngaphezulu kuka-60%.
Inhloso yethu ukuthola imikhiqizo esezingeni eliphakeme, insiza yokuqala, inzuzo ehambisanayo kanye nebhizinisi lokuwina.
Isitshizi nesomshini ongalungile
Imikhiqizo esezingeni, insiza yokuqala
IShijiazhuang Zhongmaohua Trading Co, Ltd, igxile ezintweni zokuvimbela i -virus, ukukhiqiza nokuthengisa, imikhiqizo yethu ithengise umhlaba wonke.
Amaphesenti Okuthekelisa: 91% - 100%
inzuzo: US $ 10 Million - US $ 50 Million
Abasebenzi abangaphezu kuka-150
No. Imayini Yokukhiqiza: 5
Cha. We-R&D Staff: 11 -20 People
Cha. Wabasebenzi be-QC: 5 -10 People
Ungafunda okuningi ngathi lapha.
Izimakethe Eziyinhloko: Amazwe aseMelika, iMpumalanga Yurophu, iYurophu, iNyakatho Yurophu, Ezinye Izimakethe, iNtshonalanga Yurophu, Emhlabeni Wonke, e-Asia, e-Oceania
Umsabalalisi / Umthengisi, Umenzi, Umthengisi, Inkonzo, Inkampani Yezentengiso
Amazwe aseMelika, eMpumalanga Yurophu, eYurophu, Enyakatho Yurophu, Nezinye Izimakethe, eNtshonalanga Yurophu, Emhlabeni Wonke, e-Asia, Oceania
Ihlanganisa indawo yamamitha-skwele ayi-13000 enabasebenzi abanamakhono angaphezu kwe-150 nemishini ecishe ibe yikhulu.
Indawo yokusebenzela Khombisa
Siphrinta thina kuphela kwemboni eyodwa engenise imishini ye-CNC, imishini yokusika isivinini esikhulu, umshini wokuphrinta we-ink jet kanye nomugqa ozenzakalelayo womhlangano, okwahlukanisa imikhiqizo yethu ngekhwalithi ephezulu.
Imikhiqizo emisha izokwethulwa minyaka yonke yithimba lethu lobuchwepheshe nethimba lonjiniyela ukukhuthaza izimakethe zamakhasimende. Yonke inqubo yokukhiqiza izobhekwa ngokuqinile yithimba lethu le-QC ukuqinisekisa ikhwalithi.
Amagilavu ​​we-PVC alahlekayo alahlekile Amagilavu ​​e-PVC alahlekile angamagilavu ​​epulasitiki anokulahlwa, okuyizinto ...
Ungahlukanisa futhi usebenzise kanjani ...
Ungahlukanisa futhi usebenzise kanjani izingubo zokuzihlukanisa nezingubo zokuzivikela zokwelashwa Yini umehluko ...
Uyemukelwa ku-Esethu Factory
Uyemukelwa Esezandleni Zethu Ngaphambi kokusungulwa kwenkampani yethu entsha, besikade sisebenzela ...